Property Benchmark Prices for Year 2018-2019 (Nay Pyi Taw Union Territory)) – JVMyanmar
Posted on 11/07/2019 11/07/2019 by JVM
Property Benchmark Prices for Year 2018-2019 (Nay Pyi Taw Union Territory))
Nay Pyi Taw (Union Territory) Benchmark Price Release for Year 2018-2019 and Summary Notes
International Revenue Department (IRD) in Myanmar released property benchmark prices for Nay Pyi Taw City in June, 2019. Nay Pyi Taw City, the capital city of Myanmar, is located in the center of Nay Pyi Taw Union Territory. Nay Pyi Taw is the unusual combination of large size and very low population density. It coversatotal of 2,724.75 Square miles and the current population is approximately over 1 million. Nay Pyi Taw administratively consists of eight townships; Zabuthiri, Zayyarthiri, Ottarathiri, Dakhinathiri, Puvathiri, Pyin Ma Nar, Lae Way and Tat Kone. The current real estate market in Nay Pyi Taw is getting increasing, especially in rental transactions. Moreover, the investments making in real estate industry are becoming trendy in Nay Pyi Taw and the transactions are mostly made based on the current market prices. According to the government land benchmark price information, we have learned that there is no fluctuation between the prices from 2018 and 2019. The highest prices can be found on the Pyin Ma Na Taung Nyo Road and Pa Tauk Street of Zabuthiri Township and are inarange from 40,000 MMK to 57,000 MMK per square foot. However, having said that in the previous article of Yangon Benchmark Prices, the benchmark prices are referenced for the tax purpose only, the actual market prices could be relatively higher than the benchmark prices described in the report.
Please click the following links to learn the property benchmark prices for Nay Pyi Taw Union Territory for 2018-2019 .
Land Benchmark Prices for Year 2018-2019 levied by Price Valuation Board (Nay Pyi Taw Union Territory)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် နေပြည်တော်မြို့အတွက် ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမည့်မြေကွက်စံနှုန်းများ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် နေပြည်တော်မြို့ အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမည့်အစီရင်ခံစာကို ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှဇွန်လတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နေပြည်တော်မြို့တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိသည်။ နေပြည်တော်သည် နယ်နိမိတ် အလွန်ကျယ်ဝန်းပြီး လူဦးရေသိပ်သည်းမှုနည်းပါးသော မြို့တော်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိ နေပြည်တော်အား ဇမ္ဗူသီရိ၊ ဇေယျာသီရိ၊ ဥတ္တရ သီရိ၊ ဒက္ခိဏသီရိ၊ ပုဗ္ဗသီရိ၊ ပျဉ်းမနား၊ လယ် ဝေး နှင့် တပ် ကုန်း ဟူ၍ မြို့နယ် ၈ မြို့နယ်နှင့် ဖွဲစည်းထားပြီး ဧရိယာ အကျယ် အ၀န်း စုစုပေါင်း ၂၇၂၄.၇၅ စတုရန်းမိုင်ရှိကာ လူဦးရေ ၁သန်းကျော် နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ နေပြည်တော်၏ လက်ရှိ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်မှာ သွက်လာပြီး အထူးသခြင့် အငှားဈေးကွ့က်မှာ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာကြောင်းသိရသည်။ နေပြည်တော်တွင် အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နံသူများပြားလာပြီး ကာလပေါက်ဈေးပေါ်အတိုင်း အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်နေသည်ကိုလည်း တွေ့လာရသည်။ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန မှ ထုတ်ပြန်ထားသော နေပြည်တော်၏ ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက် စာရင်းများ အရ ၂၀၁၈နှစ် နှင့် ၂၀၁၉ အတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော မြေတန်ဖိုးများ မှာ ပြောင်းလဲမှုမရှိသည့်အတွ့က် ယခင်နှစ်နှင့်နိုင်းယှဉ်လေ တန်ဖိုး အတက်အကျ မရှိကြောင်းတွေ့ ရသည်။ ကာလတန်ဖိုး အမြင့် ဆုံးမှာ တစ်ပေပတ်လည်တွင် ၄၀၀၀၀ ကျပ်မှ ၅၇၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိပြီး ဇမ္ဗူသီရီမြို့နယ်၏ ပျဉ်းမနားတောင် ညိုလမ်းနှင့် ပိတောက်လမ်းတို့တွင်တွေရရှိရသည်။ သို့သော်လည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွက် အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အဆိုပါ ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်များမှာ ၀င်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာတွင်ရည်ညွှန်းရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးမှာ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ် နေပြည်တော်အတွက် သတ်မှတ်ထားသောအိမ်ခြံမြေကာလတန်ဖိုးများအား လေ့လာရန်အတွက် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော လင့်များ တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမည့် မြေကွက်စံနှုန်းများ (နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ)
Previous PostPrevious Property Benchmark Prices for Year 2018-2019 (Yangon Region)
Next PostNext Property Benchmark Prices for Year 2018-2019 (Pyin Oo Lwin Township)